10 Sheey Oo Dhici Doona Haatan Madaama Ay Liverpool Hanatay Premier League - Taalada Klopp & Mbappe Oo Ka Mid Ah | Laacibnet.net
10 Sheey Oo Dhici Doona Haatan Madaama Ay Liverpool Hanatay Premier League – Taalada Klopp & Mbappe Oo Ka Mid Ah
30kii sannadood ee ay Liverpool sugeysay inay ku guuleysato horyaalka Ingariiska ayaa soo dhamaaday markii ay Manchester City guuldarro 2-1 ah ka soo gaartay Chelsea habeenkii Khamiista.
Waa ay u qalmeen. Liverpool ayaa aheyd koox ugu fiican horyaalka xilli ciyaareedkan.
Kooxda Jurgen klopp waxaa laga badiyay kaliya hal kulan oo ka mid ah 31 kulan oo ay ciyaareen xilli ciyaareedkan horyaalka. Waxay qarka u saaran yihiin inay jabiyaan rikoodhka dhibcaha ugu badan ee hal xilli ciyaareed.
Shabakada Givemesport ayaa saadaalisay waxa dhici doona madaama Liverpool ay haatan hanatay Premier League;
1- Taalo loo dhiso Jurgen Klopp
Madaama uu yahay tababarihii ugu horeeyay ee kooxda ku hogaamiya Premier League abid, waxaa socota xan ah in taalo looga dhiso tababaraha Jarmalka banaanka Anfield, waxaa sidaas soo jeediyay xitaa halyeeyga kooxda Steven Gerrard.
2- Kooxaha la xafiiltamaya oo suuqa isku xoojin doona
Manchester United iyo Man City si gaar ah ayay uga xumaadeen guusha Liverpool gaar ahaa Red Devils oo xafiiltan weyn uu kala dhaxeeyo Liverpool. Sidaasi darteed waxaa la filan karaa in kooxaha Man City, Man United iyo Chelsea ay si weyn isku dhisaan xagaagan si ay u joojiyaan Liverpool xilli ciyaareedka soo socda.
3- Da’ yarta Liverpool oo fursad la siin doono
Liverpool waxay heysataa xiddigo da’ yar oo tayo leh, waxaa filanayaa in fursad la siin doono xilli ciyaareedka soo socda, xiddigahaas waxaa ka mid ah Harvey Elliott. Neco Williams. Ki-Jana Hoever. Curtis Jones.
4- Virgil van Dijk oo noqon doona daaficii ugu fiicnaa taariikhda Premier League
Madaama uu haatan ku guuleystay horyaalka Premier League islamarkaana rikoodhkiisa daafacnimo uu yahay mid aan loo dhawaan karin xiddiga reer Holland ayaa ku socda wadadii uu ku noqon lahaa daafaca ugu fiican taariikhda horyaalka.
5- Netflix oo dukumeentiri ka sameyn doonta
30 sannadood waa muddo dheer in koob la sugo sidaasi darteed filo in shirkada sameysa filimada iyo musalsalada ay dukumeentiri ka sameyso Liverpool xilli ciyaareedka soo socda oo lagu maamuusayo guushooda taariikhiga ah.
6. Liverpool oo u badnaan doonta musharaxiinta abaalmarinta Ballon d’Or mar kale
Todoba ciyaaryahan ayaa u sharaxneyd Ballon d’Or sannadkii la soo dhaafay, waxaadna filataa in tiro la mid ah ay sidoo kale ka soo muuqan doonto liiska mushaharaxiinta.
Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Sadio Mane, Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson iyo Alisson Becker waa kuwa ay u badan tahay inay liiska ka soo muuqan doonaan. Yaysan la yaab kugu noqon haddii sidoo kale lagu soo daro Roberto Firmino, Fabinho iyo Andy Robertson.
7- Magaalada Liverpool oo maamuus u sameyn doonta Trent Alexander-Arnold
Madaama uu ku dhashay magaalada kana soo baxay akadeemiga kooxda, waxaa la filanayaa in magaalada Liverpool ay maamuus gaar ah u sameyn doonto xiddigooda. In lagu wareejiyo furaha magaalada ama in wado loo bixiyo magaciisa.
8 – Liverpool oo u dhaqaaqi doonta Mbappe
Taageerayaasha Liverpool ayaa carabka ku haya Kylian Mbappe iyagoo fariimo u dirayay xiddiga PSG tan iyo markii ay Liverpool hanatay horyaalka. Mbappe wuxuu taageero u yahay tababare Jurgen Klopp, waxaana macquul ah in Reds ay u dhaqaaqdo soo xerogelintiisa mustaqbalka dhow.
9- Liverpool iyo Man City oo ku tartami doona koobka ugu horeeya ee xilli ciyaareedka soo socda
Madaama Man City ay ku guuldareysatay inay difaacato koobka Premier League waxaa loo saadaalinayaa koobka FA Cup oo haatan wareega sideed dhamaadka maraya, haddii ay taasi dhacdo waxay iyaga iyo LIverpool dheeli doonaan Community Shield.
10- Taageerayaasha Liverpool oo aan la aamusin doonin
Madaama ay ugu danbeyn gacanta ku dhigeen koobka horyaalka waa ay adkaan doontaa in taageere Liverpool ah uu ka aamusnaado xaqiiqda ah inay horyaalka ku guuleysteen. Saadaasha waxay tahay inay soo hadal qaadi doonaan ilaa dhamaadka xilli ciyaareedka danbe.